Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၂၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ လာ‌ရောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၂၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ လာ‌ရောက်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Rt. Hon. Mr. John Bercow ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၂၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ လာ‌ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့၌ အောက်လွှတ်တော်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Rory Stewart နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Rt. Hon. Mr. John Bercow နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Alok Sharma ၊ ဗြိတိနိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်မှ Rt.Hon. Mr. David Evennett, MPနှင့် Principal Private Secretary to the Government Chief Whip, Mr. Roy Stone တို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်၊ Procedure Committee ဥက္ကဋ္ဌ Rt. Hon. H.E. Mr. Charles Walker, MP နှင့်လည်းကောင်းတွေ့ဆုံခဲ့၍ လွှတ်တော်ရေးရာနှင့် ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် One Brick Court မှ Sir Edward Garnier, QC Barrister, MP အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်၏ မေးခွန်း အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင်‌့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၏ မေးခွန်းများ ဖြေကြားနေမှုအား တက်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။